China Double-layer Anti-Scalding Electric Kettle LL-8860/8865 ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စက်ရုံ | AOLGA
Glass Electronic Weight Scale CW275 ဖြစ်သည်
အရည်အသွေးကောင်း 0.8L/1.0L ဟိုတယ်လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးနှင့် ...
တရုတ်အသေးစားဟိုတယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါင်းစပ်အီလက်ထရောနစ် Pas ...
Capsule ကော်ဖီစက်လေးများ ST-511
0.6L ဖြုတ်တပ်နိုင်သောကော်ဖီတောင့်ကော်ဖီစက် AC-514K
0.8L ဖြုတ်နိုင်သော Capsule ကော်ဖီဖျော်စက် AC-513K
Torque ဆံပင်အခြောက်ခံစက် RM-DF15
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 220V-240V ~, 50Hz/60Hz, 1000W; 0.8L/1.0L; 0.8M ပါဝါကေဘယ်
အရောင်: အဖြူ/အမည်း (LL-8860)/စိမ်းပြာရောင် (LL-8865)
အင်္ဂါရပ်: နှစ်ထပ်အလွှာအိုးကိုယ်ထည်; အိုးဆီးအိမ်နှင့်အတွင်းပိုင်းသံမဏိအဖုံးအတွက် SUS304; အပြင်ဘက်အိမ်ရာ: PP/ရောင်စုံသံမဏိအပြင်ဘက်အိမ်ရာ; အရည်အသွေးမြင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု; ခြောက်သွေ့ပူလောင်ကာကွယ်မှု; အလိုအလျောက်ခလုတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းသည်
• High-temperature resistant PP material သည်အပြင်ဘက်အလွှာ (LL-8860)/ stainless steel inner container ကဲ့သို့အရောင်သံမဏိ (LL-8865) ရှိသံမဏိအတွင်းခံကွန်တိန်နာကိုအပူလောင်ကျွမ်းမှုကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသော hollow insulation layer တစ်ခုဖြစ်ရန်
• ချောမွေ့ပြီးချောမွေ့စွာ၊ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူခြင်း၊ စကေးဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိ
•လုံးဝန်းသော stainless steel spout သည်အားလုံးပါဝင်ပြီးခြစ်ရာများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ မဝေခွဲနိုင်သောရေစီးဆင်းမှုနှင့်အားစိုက်ထုတ်ထားသောရေတို့စီးဆင်းလာသည်
• လုံခြုံပြီးတာရှည်ခံ၊ အပူချိန်ထိန်းထားသောရေနွေး၊ အသိဥာဏ်ပါဝါပိတ်၊ ခိုင်မာတည်ငြိမ်မှု
• ၀.၈ လီတာ/၁.၀ လီတာ၊ အမြန်ပြုတ်ခြင်းနှင့်သုံးခြင်း၊ အဆင်ပြေပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
• Ergonomic လက်ကိုင်
• Pအဖုံးကိုဖွင့်သောအခါရေပက်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ၊ ရေအေးကျဆင်းခြင်းကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ အရေခွံများကာကွယ်ပါ
• Damping ဖွင့်ထားသောအဖုံး၊ အသစ်နှင့်လွယ်ကူသောရေရရှိမှု
•ပထမဆုံးအဖုံးကို ၄၅ ဒီဂရီဖွင့ ်၍ ရေနွေးငွေ့များမ ၀ င်စေရန်ရေနွေးငွေ့ကိုရှေ့တိုးပါ။ ၇၅ ဒီဂရီကိုလည်းရေလက်ခံခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်
•အဖုံးကိုညင်သာစွာဆုတ်ခြင်း (သို့) နောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပါ
အနက်/အဖြူ (LL-8860)/အစိမ်းရင့်ရောင် (LL-8865)
အပြင်ဘက်အိမ်ရာ: PP (LL-8860)/ ရောင်စုံသံမဏိအပြင်ဘက်အိမ်ရာ (LL-8865) အတွင်းအိုးနှင့်အဖုံး: SUS304 သံမဏိ
တစ်ကိုယ်လုံးရောင်စုံသံမဏိနှင့်နွေ ဦး အဖုံး; နှစ်ထပ်အလွှာဒီဇိုင်း; အဖုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောရေနွေးအိုး၊ ပြုတ်ကျရန်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါ၊ ပေါင်းစည်းမှုချောမွေ့စွာ liner; ရေပူလောင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ရန်အပေါ်အဖုံး၏ရေစုဝေးခြင်းလက်စွပ်ဒီဇိုင်း၊ အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်ခြင်း၊ မြင်နိုင်သောအပူအညွှန်း အိုးဆီးအိမ်နှင့်အတွင်းပိုင်းသံမဏိအဖုံးအတွက် SUS304 သံမဏိသံမဏိ
0.8L (LL-8860)/ 1.0L（LL-8865）
220V-240V ~ ဖြစ်သည်
Power Cable အရှည်
W195xD195xH215MM (LL-8860)/ဒဗလျူ195xD195xH235MM (LL-8865)
W၆၀၀xD၄၀၅xH450MM (LL-8860)/W600xD405xH490MM (LL-8865)
၀.၈၅KG/PC (LL-8860)/0.95KG/PC (LL-8865)
13.7KG/CTN(LL-8860) /15.2KG/CTN (LL-8865)
အဆင့်မြင့် & အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုသည်တိုတောင်းသောအချိန်ကိုသေချာစေသည်။
OEM/ODM ၀ န်ဆောင်မှု
CE, RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများသည်အရည်အသွေးမြင့်သည်။
ယခင်: ဘက်စုံသုံးလျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး HOT-Y08
နောက်တစ်ခု: တရုတ်စတိုင်လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး XT-9S
Q1 မင်းရဲ့ quotation sheet ကိုငါဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A. သင်သင့်လိုအပ်ချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ဖြင့်ပြောပြနိုင်သည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားကိုးကားချက်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ပေးလိမ့်မည်။
Q2မရ။ မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
A.It သည်မော်ဒယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ အချို့ပစ္စည်းများသည် MOQ လိုအပ်ချက်မရှိသောကြောင့်အခြားမော်ဒယ်များသည် 500pcs, 1000pcs နှင့် 2000pcs အသီးသီး အသေးစိတ်သိရန် info@aolga.hk မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
A. ပို့ဆောင်ချိန်သည်နမူနာနှင့်အမြောက်အများမှာယူမှုအတွက်ကွဲပြားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်နမူနာများအတွက် ၁ ရက်မှ ၇ ရက်နှင့်အမြောက်အများမှာယူရန် ၃၅ ရက်ကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်တိကျသောအချိန်သည်ထုတ်လုပ်မှုရာသီနှင့်မှာယူမှုပမာဏပေါ်မူတည်သည်။
A. ဟုတ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နမူနာတစ်ခုယူနိုင်သည်။
Q5 အနီရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်ကဲ့သို့ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင်အရောင်အချို့ကိုငါလုပ်နိုင်သလား။
Q6 ငါတို့ရဲ့လိုဂိုကိုကရိယာတွေပေါ်မှာပုံနှိပ်ချင်တယ်။ သင်လုပ်နိုင်ပါသလား။
A. ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်သေတ္တာဒီဇိုင်း၊ သေတ္တာဒီဇိုင်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲများအပါအ ၀ င် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသော်လည်း MOQ လိုအပ်ချက်မှာကွဲပြားသည်။ အသေးစိတ်သိရန်အီးမေးလ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
A.2 years.We သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသောကြောင့်များသောအားဖြင့်သင်မှာယူမှုကိုအခြေအနေကောင်း၌လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
A. CE, CB, RoHS စသည်ဖြင့်လက်မှတ်များ။
304 သံမဏိလျှပ်စစ် Kettle
လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး 0.8 လီတာ
လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး ၁ လီတာ
Rapid Boil လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး
အခန်း ၁၀၀၃၊ ၁၀/F၊ တာဝါ ၁၊ Lippo စင်တာ၊ ၈၉ Queens လမ်း၊ Admiralty၊ ဟောင်ကောင်